ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ Archives - Page5of6- News @ M-Media
ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၄ M-Media ရှာဖွေတင်ဆက်သူ-ကိုလေး အမည်အပြည့်အစုံ – ဟာတင်မ် ဘင် အာဖာ (Hatem Ben Arfa) မွေးသက္ကရာဇ် – ၇. ၃. ၁၉၈၇ ကစားသည့်နေရာ –[Read More…]
January 24, 2014 — ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ
ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃ M-Media ရှာဖွေတင်ဆက်သူ – ကိုလေး အမည်အပြည့်အစုံ ကရင်မ် မွတ်စတာဖာ ဘန်ဇီမာ(Karim Mostafa Benzema) မွေးသက္ကရာဇ် ၁၇.၁၂.၁၉၈၇ ကစားသည့်နေရာ တိုက်စစ်မှူး လက်ရှိကလပ် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် နိုင်ငံ [Read More…]
December 2, 2013 — ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ